Vaovao - Inona ny taratasy mifono PE?
1: Ny dikany
Taratasy mifono PE: Manaova palitao ny sarimihetsika plastika PE mielona be eo ambonin'ny taratasy mba ho lasa taratasy mifono, antsoina koa hoe taratasy PE.
2: Ny fiasa sy ny fampiharana
Raha ampitahaina amin'ny taratasy tsotra dia misy fanoherana rano sy solika. Ampiasaina indrindra hanaovana carton-tsakafo,kaopy taratasy, harona taratasy sy fonosana sns.
Azo ampiasaina ho taratasy tsy tantera-drano indostrialy koa izy io. Ny taratasy tsotra dia vita amin'ny fibre hazo ary misy rano be mandray, ka fantatry ny rehetra fa mifoka hamandoana ny taratasy ary matahotra ny hamandoana. Ny plastika PE dia nopetahany takelaka ambonin'ilay taratasy rehefa avy nopetahany masinina laminasy hamoronana sarimihetsika manify. Satria miempo eo ambonin'ilay taratasy izy io dia mifamatotra sy mihamafy ary tsy mora esorina, ary ny fizotrany rehetra dia tsy mampiasa akora simika. Ny solvent dia tena sariaka amin'ny tontolo iainana, ary tsy mila adhesive amin'ny fanodinana faharoa ny fonosana amin'ny dingana manaraka. Ny horonantsary PE dia ampiasaina hamehezana eo ambanin'ny fiempoana mafana. Matetika izy io dia ampiasaina amin'ny fonosana sakafo hisorohana ny hamandoana sy ny diloilo. Ny paosy taratasy azo atsipy, kitapo hamburger, kitapo voa melon, boaty fisakafoanana an-taratasy, kitapo taratasy fisakafoanana ary kitapo fako fiaramanidina hitantsika amin'ny fiainantsika andavanandro dia vita tamin'io fitaovana io avokoa. Amin'ny indostria, izy io dia ampiasaina indrindra amin'ny insulation hamandoana sy tantera-drano. Matetika izy io dia ampiasaina hikirakira ny ambonin'ireo fitaovana fananganana trano mba hisorohana ny etona rano tsy hiditra ao anatin'ny solaitrabe.
3: Ilay karazany
Ny taratasy mifono PE dia mizara ho: taratasy plastika PE tokana vita amin'ny plastika ary taratasy mifono PE roa-plastika.
Ary ny ankamaroan'ny safidintsika Birao ivoara C1S na taratasy kraft hametahana PE .Mbola ampiasaina amin'ny fiainantsika mahazatra izy ireo.
4: Ny TSD
5: ny milina fanosotra anay (tokana / avo roa heny)